I-15 ye-Cardstock elula kunye neMbala yezandla yezandla | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Elizabeth Catalan | 26/11/2021 20:00 | Imisebenzi yezandla, Imisebenzi yezandla kunye nezixhobo
Isitokhwe sekhadi sisixhobo esimangalisayo sokwenza izinto njengoko sikuvumela ukuba wenze uyilo oluyilayo kunye nolunemibala ngokukhawuleza. Nobabini wena kunye nabantwana niya kubethwa ngumoya ngokuvumela ukuba intelekelelo yenu ibaleke ukwenza imisebenzi emincinci yobugcisa ngekhadibhodi.
Ukuba ufuna ukusebenzisa le mathiriyeli kubugcisa bakho obulandelayo, ndiya kukubonisa Iikhadibhodi ezili-15 zobugcisa lula kakhulu kwaye intle apho uya kuba mnandi kakhulu. Sukuphoswa yiyo!
1 Ikhadibhodi ye-ladybug
2 Ikhadibhodi minion, ilungele ukuyenza kunye nencinci
3 Intsimbi ehlekisayo enekhadibhodi enombala
4 Umthi weKrisimesi olula kunye neGlitter Cardstock
5 Umama wekhadibhodi emnyama yeHalloween
6 Iintlanzi zekhadibhodi ezichaziweyo, ezifanelekileyo ukuzenza nabantwana
7 Ikati emnyama enekhadibhodi: i-Halloween craft yokwenza kunye nomntwana
8 I-DIY: Ibhokisi yezipho zekhadibhodi
9 Ikhadibhodi yokuhombisa
10 Iivampire zeHalloween
11 I-superhero elula eneentonga zobugcisa kunye nekhadikhadi
12 Ixesha lekhadibhodi ekhanyayo
13 Ikhadi elilula leLadybug
14 Ikhadibhodi kunye nebhabhathane lephepha le-crepe
15 Ikhadibhodi isipha seentyatyambo, sigqibelele ukufumana inkcukacha
Oku kulandelayo ngomnye wemisebenzi yekhadibhodi emihle kakhulu kunye ne-flirty enokwenziwa ngabantwana ukunika ulonwabo kunye nokuchukumisa kakhulu kwentwasahlobo kumagumbi abo okanye nakwiklasi yabo yesikolo.
Izixhobo oza kuzifuna ukwenza oku ikhadibhodi ladybug Zilula kwaye kulula ukuzifumana: amakhadi anemibala (amnyama nabomvu), intonga yeglue, amehlo obugcisa, uphawu olumnyama, ipensile, irula kunye nesikere. Ngokuqinisekileyo uninzi lwabo uya kuba sele unabo ekhaya!
Olu phawu lwekhadibhodi lwenziwe nge-jiffy. Jonga amanyathelo kwisithuba Ikhadibhodi ye-ladybug kwaye ngoko nangoko uya kuba nesiphumo ezandleni zakho.
Ikhadibhodi minion, ilungele ukuyenza kunye nencinci
Yintoni umntwana angayithandiyo izihlobo? Bahlekisa! Ke ngokuqinisekileyo baya kukuthanda ukuchitha ixesha besenza omnye wabalinganiswa ababathandayo abaphilayo ngekhadibhodi encinci. Lithuba labo lokuphuhlisa ubuchule babo bokuyila kwaye bonwabe ngokudlala iipeyinti, iimpawu namakhadi.
Izinto oza kuzifuna zimbalwa kwaye kulula ukuzifumana: ikhadibhodi enemibala (etyheli nebhlowu), amehlo obugcisa, isiphawuli esimnyama, ikhadibhodi yomqulu wephepha, iglu kunye nesikere. Ukwazi ukuba ungazihlanganisa njani zonke kwaye udale ezi minion, uya kufumana imiyalelo kwisithuba Ikhadibhodi minion, ilungele ukuyenza kunye nencinci.
Intsimbi ehlekisayo enekhadibhodi enombala
Enye into elula kakhulu ukwenza ubugcisa bekhadibhodi ukuze abantwana bahlale besonwabisa okwethutyana yile intle kwaye inemibala Umbungu ohlekisayo onekhadibhodi. Kwakhona ukubeka izakhono zabo zokuqhuba kakuhle.
Ukuyenza, uya kufuna amakhadi amabini emibala eyahlukeneyo, isikhunta sokwenza izangqa zobukhulu obukhethayo, umakishi omnyama, isikere, ipencil, irabha kunye nentonga yeglue. Umphumo uyathandeka kwaye unokusetyenziswa ngabantwana ukuhombisa amagumbi abo okanye ukudlala. Uyabona ukuba kwenziwa njani kwiposti Intsimbi ehlekisayo enekhadibhodi enombala.
Umthi weKrisimesi olula kunye neGlitter Cardstock
Ngeeholide ejikeleze ikona, lixesha lokulungiselela yonke imihlobiso yendlu. Ukuba ufuna ukunika i-original touch kwaye wenze into eyahlukileyo kulo nyaka ukuyihombisa, kuthekani ngale nto Umthi weKrismesi? Yenye yezona zinto zilula zobugcisa zekhadibhodi onokuzilungiselela.
Uzakufuna ntoni? Enyanisweni, izinto ezimbalwa kakhulu: ikhadi eliluhlaza elikhazimlayo (ubukhulu be-DINA4), iinkwenkwezi ezimbini ezizincamathelayo, intonga yeglu okanye iglu kunye nesikere. Ukubona imiyalelo, cofa nje kwisithuba Umthi weKrisimesi olula kunye neGlitter Cardstock.
Kukho nekhadibhodi yezandla epholileyo kakhulu yokwenza kwiHalloween, njenge lo mama umhle. Kulula kakhulu ukwenza, kwanakwabancinci, ke xa uyigqibile ungayisebenzisa ukuhombisa amagumbi ahlukeneyo endlu, uyibeke kwiishelufa okanye kwizinto zesikolo kwaye uya kufumana umoya omnandi kwezi. iiholide.
Izinto okufuneka uzifumane ukwenza lo mama yikhadibhodi emnyama, ipensile, irabha, umtya omhlophe, amehlo ashukumayo, iglu, isikere kunye neteyiphu. Ukubona inyathelo ngenyathelo lendlela eyenziwa ngayo, jonga kwisithuba Umama wekhadibhodi emnyama yeHalloween.
Iintlanzi zekhadibhodi ezichaziweyo, ezifanelekileyo ukuzenza nabantwana
Lo ngomnye wemisebenzi yekhadibhodi ehlekisayo nelula onokuthi uyilungiselele ukuba abantwana badlale nayo. Ifanelekile ukwenza ekhaya emva kwemini xa bekruqukile! A iintlanzi ezidityanisiweyo zekhadibhodi.
Izixhobo oza kuzifuna azintsonkothanga kwaye uninzi lwazo ngokuqinisekileyo unazo ekhaya. Ngamakhadi anemibala, amehlo, iglu, isikere kunye nepeni okanye isiphawuli. Uyabona ukuba kwenziwa njani kwiposti Iintlanzi zekhadibhodi ezichaziweyo, ezifanelekileyo ukuzenza nabantwana.
Ikati emnyama enekhadibhodi: i-Halloween craft yokwenza kunye nomntwana
Olunye ubugcisa bekhadibhodi obupholileyo obufana nesilwanyana onokuthi ubenze kwi-jiffy yile intle ikati emnyama. Isebenza kuwo nawuphi na umcimbi kodwa ngakumbi iHalloween ukuba ufuna ukwenza umhombiso wendlu.
Ziziphi izixhobo oza kuzifuna? Amakhadi amnyama kunye nezinye ezinemibala enemibala, amehlo obugcisa, iglue, kunye nesikere. Njengoko ubona, zizinto ezilula kakhulu ukuzifumana ekhaya ukuze ungadingi ukuzithenga ukuba wenza imisebenzi yezandla rhoqo. Ndincoma ukuba ufunde isithuba Ikati emnyama enekhadibhodi: ubugcisa beHalloween bokwenza nabantwana ukufunda indlela yokwenza.
I-DIY: Ibhokisi yezipho zekhadibhodi
Ukuba kufuneka wenze isipho ngokukhawuleza, i-craft elandelayo iya kuba luncedo kakhulu ukugcina isipho ngaphakathi ukuba sincinci. Yi ibhokisi yekhadibhodi apho uya kufuna kuphela ikhadibhodi encinci, irula kunye nepensile, iglue.
Ngoku ukuba iKrisimesi isondele, ezi ntlobo zemisebenzi yezandla zekhadibhodi ziza ngokufanelekileyo ukubonisa izipho. Ngoko unganqikazi, ukuba ufuna ukuzama ukwenza le bhokisi intle unokufumana imiyalelo kwisithuba I-DIY: Ibhokisi yezipho zekhadibhodi.
Le mizobo yekhadibhodi ingabonakala inzima kodwa ngokwenene ayikho ukususela ngoncedo lwethemplate amanyathelo alula kakhulu. Ezi zihombiso zifanelekile ukuhlobisa ikhaya lakho ngendlela enemibala, yokuqala kunye nezandla.
Njengeminye imisebenzi yezandla, kule akuyomfuneko ukuba usebenzise izixhobo ezininzi. Isikere nje, ipensile, irabha kunye nekhadibhodi enemibala. Ungafumana ithempleyithi kwisithuba Ikhadibhodi yokuhombisa.
Los iivampires zeHalloween Ziyezinye zeekhatibhodi zobugcisa onokuzilungiselela ukunika umnxeba wokuqala kunye nokwahlukileyo kwindlu ngeli holide. Abantwana baya kukuthanda ukwenza ezi vampires zekhadibhodi! Abanayo inqanaba elinzima lobunzima ke baya kubagqiba kwangoko kwaye babe nexesha elimnandi.
Uya kufuna iphepha lendlu yangasese lekhadibhodi, ipeyinti emnyama, amehlo obugcisa, iglu, isikere, itshokolethi encinci yebha kunye nezinye izinto ezimbalwa. Ukuba ufuna ukwazi okunye, cofa apha Iivampire zeHalloween.
Oku kulandelayo ngubugcisa obumangalisayo ukwenzela ukuba abancinci nabo banokuzonwabisa, kuba kunzima kakhulu. Imalunga ne I-Superhero eyenziwe ngeentonga ukuba unokwenza ngendlela othanda ngayo. Okanye ukuyila iyunifomu yakhe okanye ukupeyinta ubuso bakhe.
Njengezinto oza kuzifuna: iintonga zobugcisa, ikhadibhodi ukwenza i-cape, iimpawu kunye neglue. Ilula ngolo hlobo! Ukuba ufuna ukuthatha inkuthazo encinci kwaye ubone ukuba yenziwa njani, ungaphoswa yiposti I-superhero elula eneentonga zobugcisa kunye nekhadikhadi.
Ixesha lekhadibhodi ekhanyayo
Le yenye yezona zinto zihle kakhulu kwaye zinemibala yekhadibhodi yezandla ongayenza ukuhlobisa ibhedi yomntwana okanye igumbi labantwana. Imalunga ne umnyama olengayo ohonjiswe ngamafu namathontsi emvula onokuthi uwenze ngokukhawuleza. Kwanabancinci bendlu banokukunceda ngamanyathelo athile.
Kwiposi Ixesha lekhadibhodi ekhanyayo uya kufumana isifundo sevidiyo ukwenza lo msebenzi wobugcisa. Bhala phantsi izixhobo oza kuzifuna! Ikhadistock enemibala, i-stapler, iipompom zekotoni, iintambo ezinemibala, ubuhlalu kunye nezinye izinto ezimbalwa.
Ikhadi elilula leLadybug
Oku kulandelayo yinguqulelo eyahlukileyo ye ooqongqothwane ukuba unokwenza ngekhadibhodi. Kwaye mhlawumbi eyona ilula! Ngoko ifanelekile ukuba abantwana baziqhelanise nezakhono zabo zobugcisa bekhadibhodi.
Ziziphi izinto oza kuzifuna ukwenza le ladybug? Elinye iphepha lokwakha elinemibala, amehlo obugcisa, imarker emnyama, isikere kunye neglu. Uyakwazi ukubona amanyathelo kwisithuba Ikhadi elilula leLadybug.
Ukuba abancinci bathanda ukwenza ubugcisa ngekhadibhodi enemilo yezilwanyana, oku kumnandi yekhadibhodi kunye nebhabhathane lephepha le-crepe Luluvo oluhle ukwenza iingokuhlwa xa unesithukuthezi ekhaya.
Isinyathelo ngesinyathelo ukwenza i-craft inokufumaneka kwisithuba Ikhadibhodi kunye nebhabhathane lephepha le-crepe. Izixhobo oza kuzifuna kulula kakhulu ukuzifumana: ikhadibhodi enemibala kunye nephepha le-crepe, amehlo obugcisa, iglue, iziphawuli kunye nezikere. Ngexesha elingephi, uya kuba neebhabhathane ezininzi ezinemibala yokuhombisa indlu!
Ukuba ufuna ukunika umnxeba wokuqala kunye nokwahlukileyo kwizinto zesikolo zabantwana, le yenye yezandla zekhadibhodi oya kuzithanda kakhulu. Imalunga ne-a isipha seentyatyambo apho unokongeza umyalezo owodwa okanye okhuthazayo.
Yenziwa okomzuzwana kwaye uya kufuna izixhobo ezimbalwa! Amakhadi nje anemibala eyahlukeneyo, iglu yephepha kunye nesikere. Kulula oko! Kwisithuba Isipha seentyatyambo zekhadibhodi Uya kufumana isifundo sevidiyo esifutshane kunye namanyathelo omawuwathathe ukwenza lo msebenzi wobugcisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla kunye nezixhobo » I-15 ye-Cardstock elula kunye neMbala yezandla yezandla